सुत्केरीलाई सहयोग गर्न जादा पसले संग पर्यो लफडा (भिडियो हेर्नुहोस्) – Online Nepal
सुत्केरीलाई सहयोग गर्न जादा पसले संग पर्यो लफडा (भिडियो हेर्नुहोस्)
April 24, 2020 412
भिडियोमा उल्लेख गरिए अनुसार लकडाउनका कारण बेरोजगार भएका उनका श्रीमान घरमा बारम्बार यौ न सम्बन्ध राख्न खोजिरहेका हुन्छन् । यो घटना अफ्रिकी देश घानाको हो । यहाँ आफ्ना श्रीमानका कारण तनाबमा आएकी एक महिलाले एउटा भिडियो बनाएर सरकारको अगाडि आफ्नो पीडा व्यक्त गरिन् । उक्त महिलाले घानाका राष्ट्रपति नाना अकुफो एडोजलाई लकडाउन समाप्त गर्नका लागि अपील गरेकी छिन् । यो भिडियो विभिन्न युट्यब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ । जसमा महिलाले लकडाउन समाप्त गर्न सरकारलाई अपील गरिरहेकी छिन । घानाका स्थानीय मिडियामा यो भिडियोलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित हुँदैछन् ।
आफ्ना श्रीमानबाट भइरहेको यस व्यवहारबाट हैरान भएकी ति महिला तत्काल उनी काममा गएको हेर्न चाहान्छिन् । यसकारण उनले सरकारसँग लकडाउन समाप्त पुर्ण रुपमा नभए पनि सबै कार्यालय खोल्न अपिल गरेकी छन । ताकि उनका श्रीमान् काममा जान सकून् र उनले त्यस्तो समस्याहरूको सामना गर्नु नपरोस् । घानाको स्थानीय मिडियामा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार धेरै महिलाले आफ्नो पतिको बारेमा यस्तो खालको खुलासा गरिरहेका छन् । पतिले पटकपटक गरिरहेको यौ न सम्बन्धको मागबाट उनीहरु आजित भएका छन् । महिलाहरु भन्छन्, ‘धेरै यौ नसम्पर्क गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेको छ । तर श्रीमानको माग घटिरहेको छैन ।’
ट्विटर सहित अन्य सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भइरहेको एक भिडियोमा महिलाले भनिरहेकी छिन्, ‘मेरो निन्द्रा खुलेको हुँदै मेरा पति यौ नसम्बन्ध राख्न तयार भएर बसेका हुन्छन् । पहिले उसलाई सन्तुष्ट पार्छु, र भान्सामा गएर खाना पकाउछु । उसले खाना खान्छ, त्यसपछि टिभी हेर्छ अनी फेरि यौ न सम्पर्कको माग गर्दछ । त्यसपछि खाली यौ नसम्पर्क । फेरि यौ नसम्पर्क । अर्को पटक पनि यौ नसम्पर्क । के महिलाहरू लकडाउनमा यौ नसम्पर्कका लागि बसिरहेका छन् ? कि हामी वास्तवमा कोरोनाभाइरसको डरमा बन्द भएका छौं, हामी आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न लकडाउनका छौं, सही ? मेरो श्रीमान्‌ले धेरै यौ न सम्बन्ध राख्नु भएको छ । म सरकारबाट मद्दत चाहन्छु ।’
पतिको हर्कतबाट ति महिलाले भनिन्,‘म मेरा पतिको अनौंठो व्यवहारबाट चिन्तित छु । ’ जानकारी अनुसार ति महिला आफुले काम गर्ने कार्यालयमा घरबाट भागिन् । त्यहाँबाट नै उनले यो भिडियो बनाएर पोस्ट गरिन् । हामी आशा गर्छौ कि उनको समस्यालाई सम्बन्धित पक्षले गम्भीरताका साथ लिएर केही कदम चाल्नेछ । यौ नसम्पर्कका लागि एकजना मात्रै तयार भएर हुँदैन यो २ जनाको सहमतिमा हुने कुरा हो । यसरी महिलामाथि ज बरजस्ती भइरहेको दबाबका लागि प्रशासनले तत्काल कारबाही अगाडी बढाउनुपर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् ।
Prevलकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै सरकार, निजि सवारी र बजार खुल्ला गर्ने तयारी
Nextनेपालकै यो ठाउँमा अविवाहित युवतीले क्वारेन्टाइन बसेकै बेला बच्चा जन्माइन्
एकाबिहानै सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर ६ रिक्टरस्केलको भूकम्प
काठमाडौं उपत्यकामा हरेक दिन संक्रमित बढ्दै, बुधबार १ सय ३८ संक्रमित थपिए